Hogaamiye Al-qaacidada Yemen ah oo diyaarad bilaa duuliye ah ay dishay – Radio Daljir
Hogaamiye Al-qaacidada Yemen ah oo diyaarad bilaa duuliye ah ay dishay
Sanca, May 07 -Hogaamiye ka tirsanaa ururka Al-qaacidda ee dalka Yemen oo lagu xidhiidhiyey weerarkii sanadkii 2000 ee qaraxii lala bartilmaameedasaday markabkii dagaalka ee Maraykanka ee USS Cole ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo ay qaadeen diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee Maraykanka ee drones-ka loo yaqaan.
Hogaamiyey beeleed ku sugan bariga dalkaasi Yemen ayaa sheegay in Fahad Al-Quso lagu dilay laba gantaal oo ay soo gantay diyaarad aan ciddi wadin oo la rumaysanyahay in laga leeyahay dalka maraykanka.
Geeridiisa ayaa waxaa xaqiijiyey ururka Al-qaacidda iyo sidoo kale safaaradda Maraykanka ee magaalada sanca ee xarunta dalkaasi Yemen.
Maraykanka ayaa ku yaboohay in uu bixinayo $5 malyuun oo dollar oo abaalmarin ah qofkii keena macluumaadka ninkaasi ama qabta.
Sarkaal Maraykan ah ayaa soo dhoweeyey dilka hogaamiyahaasi , waxana sarkaalkaasi uu wakaaladda wararka ee dalka faransiiska ee Agance France Presse (AFP) u shegay in al-Quso uu qorsheynayey weeraro ka dhan ah Marakanka iyo Yemen.
Markabkii dagaalka ee Maraykanka ee USS Cole ayaa la weeraray bishii October ee sanadkii 2000 ,isaga oo shidaal ka qaadanayey dekedda magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen,waxana lala bartilmaameedsaday dooni waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyey, iyadoo markabkaasi ay ku dhinteen 17 askari,islamarkaasina 40 kale ay ku dhaawacmeen.
Maraykanka ayaa kor u qaaday weerarada diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee lala bartilmaameedsanayo hogaamiyayaasha Al-qaacidda ee dalkaasi Yemen.